Home Wararka Dhallinyarda laga iibiyey Itoobiya, Eratariyana ay Dullaalka ka ahayd waa in Caddaalad...
Dhallinyarda laga iibiyey Itoobiya, Eratariyana ay Dullaalka ka ahayd waa in Caddaalad loo Helaa!!
Waxaa soo caddaaneyso maalinba maalinta ka dambeysa beentii ay in muddo ah qarineysay dowladda FS iyo uur kutaalladii ay qabeen hooyoyin iyo aabyaal ay ka maqan yihiin dhallinyaro ciidan ahaan loogu qaaday dalka Erateriya. Ciidamadan oo dalka ka maqan muddo ka badan laba sano ayaan weli war rasmi ah laga hayn xaaladdooda. Ciidankan ayaa ah ciidan loo soo tababareyey sida la sheegay inay ka mid noqdaan ciidamada xooga dalka ee difaacaya dalkooda.
Gen. Odawaa Y Raage.
Taliyaha CXDS Somaliyeed Gen. Odawaa Y Rage ayaa xildhibaan Cabdisabir Nuur Shuuriye uu golaha shacbiga ku weydiiyey xogta dhallinyarada la iibsaday, inkastoo xildhibaanka uusan isticmaalin erayga “iibsi”, haddana waxaa si qayaxan uu u weydiiyey Taliyaha Ciidanka waxa uu ka og yahay ciidanka tababarka loogu qaaday Earteriya isagoo xildhibaanka sheegay in Erateriya aysan jirin waxa wanaagsan oo ay ciidankeennu ka soo baran karaan.
Hasa yeeshee Gen. Odawaa oo isticmalaya mid ka mid ah 7-da nooc ee Masuuliyadda looga dhuunto (avoiding) ayaa waxa uu si xarfadeysan u sheegay si uu beri isaga dhigo wasiirkiisana u beri uga yeelo inuusan ogeyn ciidan Erateriya tababar loogu qaaday, wasiirkuna uusan haysan ciidan uu meel kale keeno. Halkaan waxaa ka cad inay jiraan laba arrimood oo kala daran kolba tii jirta kuwaas oo noqonaya Dayaacaad mas’uuliyadeed oo uu taliyaha muujiyey, taas oo ay tahay inay keento dembi iyo la xisaabtan masuuliyad darro.
Tan koowaad: Taliyaha ciidanka XDS waa awoodda ugu sarreysa ciidanka waana hogaamiyaha dhowrka kun ee ciidamada Qalabka sida. Sidaas darted haddii uu ogyahay balsa uu qarinayo waa khalad kaas oo xataa laga yaabe inuu wax ku leeyahay iskuna dayayo inuu daboolo si aan caddaalad laga gaarin, maadaama uu qarinayo khalad weyn oo qaranka dumis noqon kara oo ay ahayd inuu wax ka qabto ama uu isaga tago shaqada.
Tan labaad: ayaa iyadana ah doqonimo iyo dembi kale oo ah haddii uusan ogeyn waayo waa taliyaha CXDS, waxaana ciidanka lagu tababaray magaca XDS. Sidaas darted Gen. Odawaa waxaa mar waliba mas’uuliyadda arrinkan ku leeyahay qeyb weyn waana in loo maxkamadeeyaa marka uu waqtigeeda yimaado. Hadduu og yhay waa khalad haddii uusan ogeynna waa ka daran iyo doqonimo. Waxaa kaloo jirta in Golaha Shacbiga been loo sheegaa iyana Dembi qaran oo mudan inuu Gen. Odawaa abaalkeeda helo.
Xasan Cali Kheyre RW hore
RW hore Xasan Cali Kheyre ayaa ahaa xelligaas ninkii hogaaminayey ha’adda fulinta dalka waxaana wasaaradda Gaashaandhigga ay ka tirsan tahay wasaaradaha dalka oo toos u hos imanayey Rw Kheyre. Haddaba Kheyre waa inuu caddeeyaa doorkii uu arrintaan kulaa, waayo meel kasta oo la soo marsiiyo koley ku tahay fasaxa dayuuraddii qaadday sahayda safarkooda ee la sii siiyey, liiska magacadooda lagu qoray haddii ay noqdaan kuwa uusan ogeyn Kheyre waa mas’uuliyad darro aad u weyn oo ay tahay in lagu maxkamadeeyo, waayo taliyaayaasha Ciidamada oo xataa uu ku jiro milkiilaha dowllaadii waqtiga ka dhammaaday Fahad Yasiin iyo Odawaa Raage waxay toos u hoos tagaan Xafiiska RW oo waa sida shuruucda noogu qoran.
Farmajo iyo Fahad
Labadaan qof waa shakhsiyaadka dalkaan iyo dadkiisa dabka saartay oo shitay, welina waa ku sii wadaan waxaana rajo uga jirtaa in loo dheereeyo waqtiga ay na sii gubayaan oo uusan dalkaan u dagin. Laga yaabe in ay jiraan dad badan oo mucaarid ah oo raba in mas’uuliyadda kalligood la saaro wax kasta dalka ka khaldamay laakiin qof walba oo wax garta, kaan wax garan iska dhaafaye, waxay ku leedahay qeyb musuuliyadda oo waxay wax ka qaban kartay inuusan dalka heerkaan soo gaarin. Dadkii u sacabinayey waa in loo qabsadaa qeyb mas’uuliyadda k amid ah waayo dacaayad ay og yihiin inay been tahay ayey u dfidinayeen.
Fahad iyo Muudey oo is Toleysanaya
Xog lagu kalsoonaan karo ayaa MOL u xaqiijisay in ciidamo uu soo diray Muudey G/K/X golaha shacabka ay u dhaceen xafiiska guddiga difaaca golaha shacabka Soomaaliya xafiiskaas oo waday baaritaan la xiriira dhallinyarada Soomaaliyeed ee calooshood u shaqeystanimada looga iibiyey Itoobiy kadib markii tababar loogu qaaday dalka Eritrea, iyadoo Itoobiya ay ka ka hormarisay ciidankeeda si marka hore Somalida loo laayo oo difaac looga dhigto.
Ciidankan waxaa amray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka Cabdiweli Ibraahim Muudey oo ay fahad qaraabo yihiin in ay galaan xafiiska oo tirtiraan wixii raad ah ee arrinkaas ku saabsan. Ciidanka waxay oo dhowr maalmood kahor galay xafiiska , waxay qaateen qalab u badan computers iyo cajalado ay xog badan ku jirtay.
Waa dhab inay jiraan dad dhowr ah oo la khalday loona sheegay in la rabo in Somaliya lagu celiyo sidii ay ahaan jirtay ( Somalia Make great again) waana khalad, waayo Somaliya sidii ay ahaan jirtay iyo jidkii ay soo martay waa waxa halkaan keenay oo burburkaan, hooggaan, halaagan iyo qaranjabkaan u horseeday mana ahayn ciidan la’aan iyo awood la’aan ee waxay ahayd hogaan la’aan iyo kalitalisnimo oo awooddii dalka iyo kheyraadkii dalka si khalad ah loo isticmaalay, iyadoo lagu kabayo dacaayado wada been ah sida ciidan ayaa la dhisay iyo deyn ayaa la cafiyey, taas oo maanta wax waliba ay ku dambeeyaan inuu Beyle tuugsi la soo taagan yahay Telefishanada dalka.
Hddaba Qarnigaan 21aad Waxaa loo baahan yahay Somaliya cusuboo leh aragti ka duwan tii lagu soo maamulayey afartii sano ee tagtay, loona qabsado siyasiiyinta dalka khaladka ka galay si ay cashar ugu noqoto inaan qofna laga yeeleyn inuu dayaco masuuliyadda loo dhiibo oo aysan dalka u gelin khatar kale.
Caddaalad Caruurta Maqan iyo Waalidkooda welwelsan.
Farmajo, Fahad, Kheyre, Odawaa iyo Muudey waa in caddaladda la horgeeyaa oo loo maxkameeyaa dhibaatada, welwelka, agoontimeynta caruur badan, qarracanka waalidka iyo xaasaska iyo dhimashada dhallinyaradaaas ay la kulmeen.
Dhacdadaan foosha xun waxay waajib uga dhigeysaan qofkasta oo Somali ah, gaar ahaan musliyiinta sida RW Rooble, Gudoomiyihii hore Golaha shacbiga oo hortiisa uu beenta ka sheegayey Odawaa, culimada oo ilaa iyo hadda afkooda haysta macaankoodana iska dhuuqa, siyaasiiyiinta oo is moogeysiinaya, aqoonyahannada oo ishaa falateynaya iyo ugu dambeyn shacbiga oo aan la gubaneyn dhibaatada ku dhacday waalidiin iyaga la mid ah oo ilmahoodi maqan yihiin nolo iyo geerina aan ku ogeyn taas oo berri ku dhici karta adiga hadda ka gaabsanaya.